ဥရောပတဆင့်တစ်ဦးကခြေသလုံးနှင့်အမျှခရီးသွားလေ့ကျင့်ပေးဖို့ကိုဘယ်လို | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဥရောပတဆင့်တစ်ဦးကခြေသလုံးနှင့်အမျှခရီးသွားလေ့ကျင့်ပေးဖို့ကိုဘယ်လို
သင်တစ်ဦးဖြစ်မည်ဆိုလျှင် တစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွား သငျတို့သတဲ့ခြေသလုံးအဖြစ်မီးရထားခရီးသွားလာလို, ထို့နောက်သင်သည်လက်ျာအရပ်၌ရှိနေ. ရထားခရီးသှားဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ဥရောပတဆင့်သွားလာ သငျသညျဥရောပကမ်းလှမ်းရန်ရှိပြီးသမျှတွေ့ကြုံခံစားချင်တယ်ဆိုရင်. ကမြို့ကြီးများဖြစ်, သငျသညျကအားလုံးခံစားနိုင်သို့မဟုတ်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကသဘာဝရှုခင်းများ ရထားခရီးသွားလာ.
ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, တစ်ခြေသလုံးရှိပါတယ်အဖြစ်ရထားခရီးသွားလာ သည်အခြားအားသာချက်တွေအများကြီး. သင်သည်သင်၏အချိန်အတွက်အရာအားလုံးတွေ့ကြုံခံစားရ, နှင့်ရထားချောချောမွေ့မွေ့နဲ့မဆိုကူညီပြီးမပါဘဲသင်ကလုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေပူဇော်. ဒါဟာရံဖန်ရံခါနှေးကွေးနေပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမစိတ်ဖိစီးမှုခရီးသွား၏ဤ mode မှာရှိမယ့်, သော်လည်း လေယာဉ်တစ်ခုလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအရာများမှာ. သင်လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးသွားလျှင်, ၏စဉ်ဆက်မပြတ်စိတ်ဖိစီးမှုရှိပါတယ် ရေအလွန်ထူထပ် လေဆိပ်နှင့် overzealous လုံခြုံရေးအစီအမံများ. ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, တချို့ဖြစ်ရပ်အတွက်, သင်တစ်ဦးရထားယူလျှင်သင်ပိုမြန်သင့်ရဲ့ဦးတည်ရာကိုရလိမ့်မယ်!
ဤအခြင်းနှင့်အခြားအကြောင်းပြချက်များအတွက်, သင့်ရဲ့စည်းကမ်းချက်များကိုပေါ်ရထားခရီးသွားလာသင်လုပ်နိုင်သောအကောင်းဆုံးအရာပါပဲ. သင်ဤမှော်ခြေသလုံးစွန့်စားမှုစတင်ပါလိုလျှင်, ဤဆောင်းပါးတွင်သငျသညျအကွံဉာဏျနဲ့ကောင်းကောင်းလုပ်ဖို့ဘယ်လိုပေါ်အကြံပေးချက်များပေးခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီပေးပါမည်.
သင်တစ်ဦးခြေသလုံးစွန့်စားမှုအဖြစ်သင့်ရထားခရီးသွားစတင်ခင်မှာ, သငျသညျထိုသို့ပြုမှအလိုတော်ရှိသည်ရှိသည်, သင်ပိုက်ဆံရန်ရှိသည်.
သငျသညျလှည့်လည်ဖြစ်လိုလျှင် မီးရထားခရီးသည်, သင်တစ်ဦးအလွတ်အဖြစ်သို့မဟုတ်သင့်အိမ်ရာမှအလုပ်မလုပ်လျှင်သင်တို့သည်နောက်ပြဿနာများရှိသည်လိမ့်မယ်. သင်သည်သင်၏ laptop ကိုအပေါ်လုပ်နိုင်မဆိုအလုပ်, သင်သည်မည်သည့်တည်နေရာအတွက်လုပျနိုငျ.
အကယ်. သင်က အနားယူချင်တယ် ဒါမှအလုပ်ကနေအားလပ်ရက်အထိ, သငျသညျအမြော်အမြင်ရှိရှိသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံဖြုန်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါကောင်းသောအရာတစုံတခုကိုကူညီအချို့သောဖြေရှင်းချက်ရှိပါတယ်ဖြစ်ပါသည်.
30days သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအဘို့ရထားနဲ့ခရီးသွားမယ်ဆိုရင် Interrail ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ pass ကိုရှေးခယျြထက်သင်သိရ. သို့သော်လူပျိုလက်မှတ်တွေသင်သည်သင်၏အဆင်ပြေမှာဥရောပနိုင်ငံအများစုဖြတ်ပြီးခရီးသွားလာရန်အခွင့်အလမ်းကိုကမ်းလှမ်း, ကခြေသလုံးရဲ့အိပ်မက်အောင်. သငျသညျအခါဘယ်နေရာမှာသင်ချင်တယ်သွားကြဖို့ get, နှင့်တစ်မူထူးခြားတဲ့နယ်လှည့်အတှေ့အကွုံဖန်တီးရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းင်.
သင်သည်သင်၏ရထားခရီးသွားဘို့ကိုရှေးခယျြဘာပဲ, you can still ဒီလမ်းအတွက်ပိုက်ဆံကယ်တင်.
ခရီးသွားသူတစ် ဦး အဖြစ်သင်လေ့ကျင့်သောအခါငွေမည်သို့စုဆောင်းနိုင်ပုံ
အတှေ့အကွုံဒီ type ပတ်သက်. ကောင်းသောအရာကိုသင်မူလကပင်လျော့နည်းပိုက်ဆံဖြုန်းပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ. ဒီနေဖြင့်, ငါတို့သည်သင်တို့တစ်ခြေသလုံးအဖြစ်ခရီးသွားလေ့ကျင့်သည့်အခါဆိုလို, သငျသညျနေလျှင်သင်ကိုအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံကိုရလိမ့်မယ် စျေးပေါနေထိုင်ရန်အဆောင်များ, သင့်ရဲ့ချက်ပြုတ် အစာ, နှင့်ပိုပြီး.
ခရီးသွား၏ဤ mode ကိုများအတွက်ဝင်ရောက်ခြင်းကိုသင်ပိုက်ဆံကယ်တင်မည်.
တစ်ခြေသလုံးအဖြစ်ရထားခရီးသွားဧည့်ခန်းစာအုပ်သွားသည့်အခါသုံးစွဲအများစုမှာပိုက်ဆံ. သို့သျောလညျး, သငျသညျနေထိုင်ရန်အဆောင်များစာအုပ်ဆိုင်လျှင်, သငျသညျအဖြစ်ငွေအများကြီးကိုကယ်တင်နိုင် သူတို့ပိုပြီးတတ်နိုင်ဟိုတယ်များထက်နေ နှင့်တစ်ဦးပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးပိုအမှတ်ရစရာအတွေ့အကြုံကိုပူဇော်. ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, သင်တစ်ဦးတည်းသွားလာသည့်အခါ, သင်က၌ရှိသကဲ့သို့လူများစွာနှင့်အတူမည်သည့်အခန်းကစာအုပ်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်, အဆိုပါအရာဖြစ်ပါသည် စျေးအသက်သာဆုံး option ကို. ထိုအခါငါတို့တှငျယုံကြည်စိတ်ချ, ဤသည်ကိုသင်တူသောစိတ်တူခရီးသွားများနှင့်အတူပေါင်းသင်းခွင့်ပြုသောကြောင့်သင်ဤချင်ပါလိမ့်မယ်.
သို့သော်ငြားလည်း, သင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒေသခံများနှင့်တွေ့ဆုံရန်, သင်အသုံးပြုသင့်ပါတယ် Couchsurfing, သငျသညျဒေသခံများနှင့်အတူနေထိုင်ရလိမ့်မယ်ဤနည်းသောကြောင့်,. Plus အား, သူတို့သည်သင့်ကိုသူတို့မြို့အကြောင်းပိုမိုပြောပြပါနှင့်လာရောက်လည်ပတ်ရကျိုးနပ်သငျသညျအပေါငျးတို့သပျော်စရာသောအရပ်တို့ကိုမဖျောပွနိုငျ.
သင့်ရဲ့ငွေစုမှာကွာစားသောနောက်လာမည့်အရာဖြစ်ပါသည်, ကောင်းစွာ, စား. သင်ကဘော်ဒါဆောင်သို့မဟုတ်တိုက်ခန်း၌သင်တို့၏အစားအစာများပြင်ဆင်နေခြင်းဖြင့်အစားအစာအပေါ်ပိုက်ဆံကယျတငျနိုငျ. အများအားဖြင့်တော့အခမဲ့သုံးနိုင်တဲ့မီးဖိုချောင်တွေပါ. ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, အဆိုပါဘော်ဒါဆောင်ဖွင့်အခြားအခွင့်အလမ်းကိုလူတို့နှင့်အတူထွက်ဆွဲထားနှင့်အချို့သောကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်ဖြစ်ပါသည် အစားအစာများ ဝေမျှဖို့.
ရထားခရီးသွားခြင်းသည် Nomad ၏အကြံပြုချက်များဖြစ်သည်
သငျသညျ extrovert တစ်ခြေသလုံးအမျိုးအစားအဖြစ်ရထားခရီးသွားနေပါလျှင်, နေထိုင်ရန်အဆောင်များမှာတည်းခိုသင်လိုလူအဘို့ဖြစ်၏သကဲ့သို့သင်တို့ကိုးကွယ်လိမ့်မယ်အရာဖြစ်၏.
သငျသညျလူကန်လန်တစ်ခြေသလုံးအမျိုးအစားအဖြစ်ရထားခရီးသွားနေပါလျှင်, သငျသညျကိုအခြားသူများနှင့်အတူထွက်ဆွဲထားချင်တယ်ဆိုရင်သင်အနည်းငယ်ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက်ထားရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်. အဆိုပါကောင်းသောအရာရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဖြစ်ပါသည်, သင်ကရန်အသုံးပြုရလိမ့်မယ်. နောက်ဆုံးမှာ, တစ်ခြေသလုံးခရီးသွားဖြစ်ခြင်းနေချိန်မှာသင်တခြားသူတွေနဲ့အထဲကဆွဲထားရလမ်းကိုခစျြပါလိမ့်မယ်.
သငျသညျဒေသခံများနှင့်အတူနေရန်အိပ်ရာ surfing ကိုအသုံးပြုဖို့ရန်မလိုပါ; သင်သည်လည်းထိုသူတို့နှင့်အတူထွက်ဆွဲထားဖို့ကသုံးနိုငျ. ဒီ app ထဲကညဉ့်တွင်နိုင်ငံခြားသားများကိုယူပြီးချစ်သောသူဒေသခံများနှင့်အတူ meetups သတ်မှတ်ထားဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်.
အဆိုပါခါးပိုက်နှိုက်သတိပြုပါ! ကမ်ဘာပျေါတှငျမဆိုအခြားမြို့နှင့်အတူအမှုဖြစ်သကဲ့သို့, ဥရောပမြို့ကြီးများ ခါးပိုက်နှိုက်နှင့်ခရီးသွားဧည့်များ၏အားသာချက်ယူရန်ကြိုးစားသူကိုကတခြားရာဇဝတ်သားများ. သငျသညျသတိထားရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်, သင်သွားရောက်လည်ပတ်နေအရပျမြားအတှကျခါးပိုက်နှိုက်အခြေအနေပေါ်တက်ဖတ်သင့်. အမြဲတမ်းတစ်မြို့သွားရောက်ခြင်းမပြုမီအွန်လိုင်းသုတသေနပွု.
သင့်ရဲ့ခြေသလုံးခရီးသွားလာဘဝကပိုအဆင်ပြေပါစေနိုင်သော app များကိုအမြဲတမ်းသုံးပါ. သင့်ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုခြေရာခံရန်, အမြောက်အများ apps များ သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအပေါင်းအဘော်နိုင်ပါတယ်.
ရန်သတိရပါ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးခရီးသွားသည်. သငျသညျခြေသလုံးခရီးသွားတစ်ဦးရထားဖြစ်သွားနေတယ်ဆိုရင်, သင်သာတစ်ဦးပိုမိုလွယ်ကူစွာအချိန်ရှိသည်လိမ့်မယ် လိုအပ်သောရဲ့အဘယ်အရာကိုတင်ဆောင်လာသော. ဘော်ဒါဆောင်လက်သုတ်ပုဝါကဲ့သို့မရှိမဖြစ်သာယာအဆင်ပြေမှုများအများကြီးပူဇော်, hairdryers နှင့်တူသော, ဒါကြောင့်သင်ဥစ္စာကိုဆောင် ခဲ့. ရန်မလိုပါ. Plus အား, သူတို့များသောအားဖြင့်သင်ကယူရိုသို့မဟုတ်နှစ်ခုအတွက်သုံးနိုင်သည်ကိုအဝတ်လျှော်စက်တွေနဲ့အခြောက်ခံစက်များရှိ, ဒါကြောင့်သင်တစ်ခုခုကိုသင်နှင့်အတူအလွန်များအဝတ်ကိုယူရန်မလိုပါ. သငျသညျပစ္စည်းပစ္စယတွေအများကြီးနဲ့အတူခရီးလိုပါက, ကျောပိုးအိတ်ခရီးထွက်ပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်စေခြင်းငှါ,.
အလုံးစုံ, တစ်ခြေသလုံးအဖြစ်ရထားခရီးသွားတစ်ဦးလှပလုပ်ရတဲ့-အခမဲ့အတွေ့အကြုံ. သင်အလွယ်တကူအားလုံးတူသောအဆင်းလှနိုင်ငံများတလွှားနေရာအများအပြားသို့သွားရောက်နိုင်ပါတယ် ပြင်သစ်, ဂျာမနီ, အီတလီ, နှင့်ပိုပြီး. Plus အား, သင်တွေ့မြင်ရ လှပသောကျေးလက် ပြီးနောက် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရှုခင်းများ သဘာဝပူဇော်ဖို့ရှိပါတယ်. အဘယ်သူမျှမကအခြားခရီးသွားရွေးချယ်မှုထိုကဲ့သို့သောမမေ့နိုင်သောနှင့်ပျော်စရာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူသငျသညျပေးပါလိမ့်မယ်.
တစ်ခြေသလုံးအဖြစ်အကောင်းဆုံးရထားခရီးသွား Make စီမံကိန်း ကြိုတင်မဲနှင့် သင်ကလိုအပ်အဆိုပါရထားလက်မှတ်တွေကိုဝယ်, နှင့်သင်သည်သင်၏စွန့်စားမှုစတင်ရန်သတ်မှတ်ထားပါလိမ့်မယ်!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူပြီးရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခရက်ဒစ်ပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ link ကို ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-travel-nomad-europe%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#traveleurope europeantravel europetravel အကြံပေးချက်များ trainjourney Tranride ရထား traintip ရထားအကြံပေးချက်များ ရထားခရီးသွား မီးရထားခရီးသွားလာအကြံပေးချက်များ ရထားခရီးစဉ် ခရီးသွား traveltips